4.3 % , ayay Soomaalidu haystaan shaqooyinka sare ee kenya. | Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/4.3 % , ayay Soomaalidu haystaan shaqooyinka sare ee kenya.
4.3 % , ayay Soomaalidu haystaan shaqooyinka sare ee kenya.
Bulshada Soomaalida ee ku dhaqan waddanka Kenya, ayaa lasheegay in 4.3 % ay haystaan shaqooyinka maamulka saree e waddankaas. Waxaana lasheegay in Soomaalidu ay noqotay qoomiyadda tobnaad ee ugu tirade badan waddankaas Kenya.
Warbixin oo baahiyay wasiirka hawlaha guud ee Waddanka Kenya, Mr Margaret Kobia , waxa uu ku sheegay in 416 –shaqoyin oo kuwa heerka sare ay somaalidu hayaan 17 kamid ah .
Shaqooyinka intooda badan, waxaa haya saddexda qabiil ee ugu waawayn waddanka Kenya oo kala ah; Kikuyu, Kalenjin and Luo oo isu gayntii haysta 200 shaqooyinkaas ka mid ah.
Warbixinta, ayaa intaas ku dartay in lixda qabiil ee ugu waawayn waddankaasi ay buuxiyeen 80% shaqooyinka dawladda, iyaga oo 20% keliya uga tegay bulshada inta hadhay oo dhan.
Tirakoob lasameeyay sannadkii 2019, ayaa lagu sheegay in tirada Soomaalida Kenya ay dhan tahay 2.7 million oo qof, halka sannadkii 2009 –na ay ahayd 2.3 million qof, waxaana tiradaasi ay ka dhigaysaa baa layidhi mid kamida qoomiyadaha ugu badan waddanka Kenya.
Wakhtigii uu wasiirka hawlaha guud warbixintan ka hor Akhrinayay golaha baarlamanka, xildhibaannadu waxa ay waydiiyeen sababta keentay in qabiil kali ah ahi isku fooqsado shaqooyinkii waddanka yaalla badankooda.
Sanator lagu magcaabo Naomi Shinyanga, ayaa wasiirka waydiiyay su’aal ahayd “ Mar haddii qabiil kali ahi uu buuxiyay shaqooyinkii sare sare oo dhan ma odhan karaa, dadka in hadday ma lahan xirfaddii shaqo ee loo baahnaa‘’
Afrika, oo rajaynaysa 220 milyan oo tallaalka COVID-19 ah
Guddiga arr. Gudaha, Amniga &Gobollada Golaha Shacabka oo la kulmay Wasiirka Amniga